Al Shabaab oo Weeraro ka fuliyay deegaannada Warmaxan iyo Qalimoow.
R/wasaaraha Ingiriiska oo Isbitaal ladhigay isagoo qaba caabuqa COVID19.
Saturday March 07, 2020 - 20:21:52 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Xoogaga Al Shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay weeraro khasaara badan dhaliyay ka fuliyay deegaanno katirsan labada Shabelle.
Weerar maanta gelinkii dambe ka dhacay deegaanka Warmaxan ayaa lagu dilay ugu yaraan 1 askari mid kalane dhaawac ayaa soo sheegay, xoogaga weerarka geystay ayaa hub ka furtay askariga ladilay oo katirsanaa ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa Mareykanku tababaray ee Bangaraafta loo yaqaan.
dhinaca kale Wararka ka imaanaya gobolka Sh/dhexe ayaa sheegaya in markale weerar jidgal ah lala beegsaday ciidamo katirsan kuwa midowga Afrika gaar ahaan kuwa ka socda dalka Burundi.
Maanta gelinkii dambe ayay xoogaga Al Shabaab weerar dhabbagal ah udhigeen kolonnyo katirsan ciidamada Burundi, ilo wareedyo ayaa sheegaya in qarax xooggan lala helay ciidamadan kadibna waxaa xigay dagaal fool ka fool ah.
dadka deegaanka ayaa sheegay in ay maqlayeen jugta qaraxyo iyo rasaas xooggan, weerarka oo ka dhacay deegaanka Qalimoow oo 30 Km ujira degmada Balcada ayaa imaanaya xilli Al Shabaab ay sare uqaadeen beegsigada ciidamada Burundi ee ku sugan Sh/dhexe